Nke a na peeji nke ga-chọpụta gị nchọgharị asụsụ English ma ọ bụ Japanese na ngosi na na nwoke asụsụ.
2. Biko họrọ otu n'ime mkpọchi n'okpuru gị họọrọ coupon kwekọrọ na gị sistemụ.3. Biko nyochaa LC Tech ebighị Usoro Guide gị ntụziaka na-inweta ihe ebighị koodu eji gị RPSSD Oghere Usoro ọgụgụ.2. The button n'okpuru họrọ coupon、Biko họrọ dị ka gị sistemụ。3. RPSSDシリアル番号を使用し、Biko na-ebighị koodu。Olee otú iji na-enweta LC Tech ebighị Usoro Guide Biko lelee。
Biko wụnye software na kọmputa, na mgbe ị na-agba ọsọ ya maka oge mbụ, you will then be prompted to activate your software. Ị ga-ahụ ga-nyere a njikọ ebighị page. Biko soro njikọ jupụta na ụdị, be sure to include your serial number to activate your free copy of RescuePRO® SSD software. Pịa ebe a maka a nzọụkwụ-site-nzọụkwụ ndu ebighị
Ịkpọtụrụ anyị, biko họrọ gị sistemụ si mkpọchi n'okpuru na gaba Kpọtụrụ Anyị ụdị n'ihi gị sistemụ. ma ọ bụ Nhọrọ, biko na-akpọ anyị (US) ọnụ ọgụgụ free (866) 603-2195, ma ọ bụ na mpaghara (727) 449-0891. N'ihi na Europe oku +44 (0)115 704 3306. For Japan, call +81-50-6861-8011, from inside Japan, call 050-6861-8011.
Wụnye software na kọmputa gị、N'oge mbụ oji a kpaliri na-arụ ọrụ、A njikọ na ebighị page egosi。Biko tinye ozi ndị dị mkpa na ụdị dị na ọdịnaya nke njikọ。N'oge ahụ、RescuePRO® SSD ソフトウェアのシリアルコードを入力ください。
** Biko rụba ama: Should you have a coupon for RescuePro Deluxe for SSD with a serial number that begins with RPDLX-0602,
Oghere Usoro ahụ ọnụ ọgụgụ na e biri ebi na gị dere adabaghị.Ọ ga na-amalite RPSSDYou will then need to provide your complete RPDLX-0602 Oghere Usoro ọgụgụ na SanDisk na-enweta a nnọchi. **** Nke a bụ oke biri ebi coupon